आफ्नो अनुहारको ‘डार्क सर्कल’ हटाउन खानुहाेस् यस्ता खानेकुरा - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
आफ्नो अनुहारको ‘डार्क सर्कल’ हटाउन खानुहाेस् यस्ता खानेकुरा
बढी काम गर्ने, तनाव लिने, पर्याप्त नसुत्ने लगायत कारणले आँखावरिपरि ‘डार्क सर्कल’ देखापर्ने गर्छ । यसले मानिसको समग्र सुन्दरतामै ह्रास ल्याउँछ । डार्क सर्कल हटाउन यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुपर्छः
भिटामिन एयुक्त खाना खाँदा छालाको ‘रिपेयरिङ’ र ‘टाइटनिङ’मा टेवा पुग्छ । साथै, छालामा रक्तसञ्चार पनि तीव्र हुन्छ । त्यसैले डार्क सर्कल हुनेहरूले गाजर, फर्सी, पाकेको मेवा, आँप, हरियो सागपात आदि बढी खाने गर्नुपर्छ ।
भिटामिन सीले दिमागमा सेराटोनिन नामक रसायन बढी उत्सर्जन गराउँछ, जसले गर्दा राम्रोसँग निदाउन सकिन्छ । सुन्तला, कागती, अमला, खर्बुजाजस्ता भिटामिन सीयुक्त खाना बढी खाने गर्नाले डार्क सर्कल बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
भिटामिन केले रगतलाई गाढा बनाउन मद्दत गर्छ र रक्तसञ्चारलाई पनि तीव्र बनाउँछ । अंगुर, ब्लुबेरी, बन्दाकोभी, ब्रोकाउली, केराउ आदिमा भिटामिन के प्रशस्त पाइने भएकाले डार्क सर्कल भएकाले यस्ता खाना बढी खाने गर्नुपर्छ ।
भिटामिन ईमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले छालामा जम्मा भएका विकारलाई शरीरबाहिर निकालेर यसलाई चम्किलो बनाउँछ । त्यही भएर डार्क सर्कलको समस्या भएकाले पालुंगो, हाडे बदाम, बदाम, किवी, ओखर, सूर्यमुखीका बिजजस्ता भिटामिन ईयुक्त खानेकुरा बढी खानुपर्छ ।
घरमा ‘मनीप्लान्ट’ रोप्दा पैसा आर्जन देखि लिएर यस्ता कसैले नसोचेको फाइदाहरु ! (जान्नुहोस्)
यी चार राशी भएका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन्, कतै तपाइको राशी त परेन ? (जान्नुहोस्)
कसरी सुरु भयो ‘हनिमुन’ जाने चलन ? के हो हनिमुनको अर्थ ? (जान्नुहोस्)
युवतीहरु चाहन्छन् ! युवकले नै प्रेम प्रस्ताव राखुन्, यस्ता छन् कारणहरु !
यसकारणले मोटी केटी पाउने पुरुषहरु भाग्यमानी !
के तपाई कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ ? यसरी माग्नुहोस् फोन नम्बर !